फेसबुकमा च्यालेन्ज गर्नेलाई च्यालेन्ज ! – Nilo Aakash
निलो आकाश संवाददाता १० आश्विन २०७७, शनिबार १०:४०
फेसबुकमा हेर्नुहोस्, सबैसँग केही न केही छ । कोहीसँग ताली छ, कोहीसँग गाली छ । कोहीसँग श्रीमती छ, कोहीसँग साली छ । कसैको जोडी छ, जोडी नहुनेको परिवार छ, कोही पनि नहुनेको एक्लो ज्यान छ । कोही श्रीमान च्यालेन्ज भन्दै बुरुक्क उफ्रन्छन्, कोही श्रीमती च्यालेन्ज भन्दै मसक्क मस्कन्छन् । कोही आफू त सिंगल भनेर ठसक्क ठस्कन्छन् । नपत्याए कपलको अर्को अर्थ हेरौं न । ‘क’ भनेको ‘करमा’ ‘प’ भनेको ‘परी’ ‘ल’ भनेको ‘लम्बिएको’ बाध्यकारी सम्झौता ।
यसैगरी हामी नेपालीलाई फुर्सद धेरै हुन थाल्यो भने सिंगलहरुका ब्वाईफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड त सजिलै देख्न पाइन्छ नै । श्रीमानले श्रीमतीको ब्वाईफ्रेन्ड र श्रीमतीले श्रीमानको गर्लफ्रेन्ड समेत देख्न पाउँछन् । अझ डेटिङ र हनिमुन च्यालेन्ज पनि फेसबुकमै देख्न पाइएला । पहिले भोट नदिएर वामदेवलाई मतदाताको च्यालेन्ज । अहिले चुनाव हराउने मतदातालाई वामदेवको च्यालेन्ज ।
कोरोनाले जागिर गुमाएकालाई फेरि काम पाउने च्यालेन्ज । काम भैरहेकाहरुलाई टिकिरहन च्यालेन्ज । यस्ता च्यालेन्ज कति छन् कति । तर हामी आफ्नै श्रीमान, आफ्नै श्रीमती, आफ्नै बाआमा, आफ्नै छोराछोरी देखाएर च्यालेन्ज गर्न व्यस्त छौं । यसरी च्यालेन्ज गर्नेलाई च्यालेन्ज छ – फेसबुकमा श्रीमान च्यालेन्ज गरेझैं ब्वाईफ्रेन्ड च्यालेन्ज गर्न सक्छौ ? श्रीमती च्यालेन्ज गरेझैं गर्लफ्रेन्ड च्यालेन्ज गर्न सक्छौ ? च्यालेन्ज नै च्यालेन्ज भन्दै रमाउनेहरुले बाढी पहिरो पीडितलाई राहत बाँड्ने च्यालेन्ज गर्न सक्छौ ?